भुलेर पनि यी ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुहोस्, नत्र… – Krazy NepaL
भुलेर पनि यी ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुहोस्, नत्र…
April 12, 2021 1436
काठमाडौँ ।दान दिनु आफैंमा उत्तम कार्य हो । शास्त्रले पनि दान दिनु पुण्यको काम हो भनेको छ । दान दिँदा के दिने के, नदिने यसबारे भने जान्नैपर्ने हुन्छ।
चाणक्य नीति अनुसारका तल उल्लेखित ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुस्स्
१. स्वंयबरको औंठी
अर्को कुरा अरुको हातको घडी पनि तपाईले नबाध्नु होला । यस्तै उपहार या दानमा पनि घडी दिनु राम्रो होइन । धेरैको बानी हुन्छ उपहारमा घडी दिने ।
अझ विदेशबाट आउनेले त प्रायजसो घडी नै उपहारमा दिने गर्छन् । तर त्यसो गर्नु नराम्रो हुने चाणक्य नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
धन लक्ष्मीको कृपा हो । तर धनले कोही कसैलाई आफ्नो बनाउँन सकिदैन । उदाहरणका लागि तपाईले कसैलाई तलब दिएर राख्नुभएको छ र केहि दिन ढिला भयो भने तपाईमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भैहाल्छ । अनि धनले कसरी आफ्नो बनाउँन सकिन्छ रुशास्त्रका अनुसार धन सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो।
धनकै कारण कति अपराधिक घटना घट्ने गरेको समाचार बेलाबेला आइरहन्छ । अझ आफन्तसँग त झन् पैसाको लेनदेन गर्नै हुँदैन । धनकै कारण सम्बन्ध तोडिन पनि सक्छ।
Prevयो साता चम्किदैछ ८ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् चैत २९ देखि वैशाख ४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
Nextघरको यो दिशामा राख्नुहोस् शंख, घरमा प्राप्त हुनेछ सकरात्मक उर्जा र धनसम्पत्ति
सामाजिक अभियान्ता शरिन तामाङले महिलासँगै बिहे गरिन् !
आईफोन १३ को प्रि–बुकिङ खुला, कुन मोडलको मूल्य कति ?